Mpiady Mipetra-potsiny Ambony Seza Ao Rosia Nefa Manenjika Ny Lehiben’ny Mpihoko · Global Voices teny Malagasy
Mpiady Mipetra-potsiny Ambony Seza Ao Rosia Nefa Manenjika Ny Lehiben'ny Mpihoko
Voadika ny 10 Jolay 2014 8:53 GMT
Mpiady mipetra-potsiny ambony seza? Manana ny anjara sary katsikana ho azy i Sergei Kurginyan ao amin'ny aterineto Rosiana. Sary nafangaron'i Kevin Rothrock.
Misaritaka ireo mpomba ny fihokoana tany atsinanan'i Okraina, taorian'ny nandosiran'ireo mpihoko niala ny toeram-pamaharany tao Slovyansk tamin'ny herinandro lasa. Igor Strelkov, ilay kolonely misotro ronono niasa tamin'ny sampam-pitsikilovan'ny tafika Rosiana, mibaiko ireo milisy mpihoko, no niharan'ny fanakianana mivaivay avy amin'ireo mpandokandoka azy fahiny noho ny “nanolorany” ny tanàna ho an'ny andian-tafiky ny fanjakàna. Ny 5 Jolay, taorian'ny nihemoran'i Slovyansk, notefotefohan'ireo Rosiana sasany i Strelkov, nametraka fanontaniana tampotampoka teo momba ny fahendreny sy hatramin'ny zava-manosika azy mihitsy aza.
Afo nandrehitra ny kiana mahazo ny fitroarana tao Okraina ny fifandirana anaty izay nitrandraka manokana ny bilaogin-dahatsary (jereo etsy ambany) an'i Sergei Kurginyan. (Vakio ato ny amin'ny fiteny Rosiana)
Manan-javatra ifandraisany amin'ny toetry ny lehilahy irain'ny Fahateraham-baovao i Kurginyan, asa efa nataony ny fikirakiràna ny siansa politika, géophysicien, tale-nà teatra, ary mpanentana taminà fahitalavitra. Efa maherin'ny telo taona lasa izao, natsangany ny “hetsika fitiavan-tanindrazana” antsoina “Ny tena atin'ny fotoana” / Essence of Time, izay nahasarika olona maherin'ny 9 tapitrisa hisoratra anarana aminy, sy fitsidihana 2,2 tapitrisa tao amin'ny YouTube. Nandritry ny herinandro lasa iny, nampiasain'i Kurginyan ny fantsona Youtube an'ny Essence of Time mba hamafàzana fankahalàna ny governemanta ao Kiev.
Rehefa niala tao Slovyansk i Strelkov, navilin'i Kurginyan ho any amin'ny mpitarika ny mpihoko ny hatezerany, tonga hatrany amin'ny fandisoana azy ho tsy niaro ny tanàna hatramin'ny fara-fofonaina, toy izay nataon'i Leonidas, mpanjakan'ny Sparta. Tao anatin'ny telo andro monja, nahasarika mpijery efa ho 300.000 ilay lahatsary manakiana an'i Strelkov.
Andro iray taorian'ny nandefasany ilay lahatsary tao amin'ny Youtube, nanao fanamby tamin'ireo Rosiana mpampiasa Twitter ny kaontin'i Alexey Navalny ao amin'ny Twitter hamorona sary mananihany ampiasàna sary avy ao amin'ilay lahatsary. (Ny sary nofinidin'i Navalny dia manasongadina an'i Kurginyan manainga ny tànany mivoady manoloana ny mpihaino azy milaza hoe i Strelkov, mifanohitra amin'izay fitarainana miverimberina foana mikasika ny tsy fahampian'ny ho enti-manana, dia nahazo izay tohana rehetra nilainy avy amin'i Rosia.) Mpikatrotra iray mafàna fo miady amin'ny kolikoly sady mpanakiana tsy mifidy hambara amin'ny fanohanana nataon'i Rosia ho an'ireo mpihoko tao Okraina, sady bilaogera faran'izay malaza ihany koa i Navalny, manana mpanjohy 674.000 ao amin'ny Twitter.
Nalaky ny nanipihan'i Navalny fa aminà fotoana iray ao anatin'ilay lahatsary i Kurginyan dia tsy nitsitsy teny ihany koa tamin'ireo “bevava eny ambony seza fotsiny” izay manohitra ny fomba fahitàny ny raharaha tao Okraina. Araka ny fitrangany, dia avy eo ambony sezalavany i Kurginyan no mandefa ity hafatra ity, mipetra eo akaikinà basy roa mamahan-tena, moa va tsy sary vita maneho ireo mpanao fandalinana eny ambony seza fotsiny.
Сергей Кургинян обрушился с критикой на “диванных болтунов” pic.twitter.com/pgmnat4aa7
— Alexey Navalny (@navalny) July 6, 2014
Sergei Kurginyan manatefotefoka mafy an'ireo “bevava eny ambony seza.”
Oleg Kashin, mpanao gazety ary endrika fanta-daza eo amin'ny media sosialy Rosiana, dia nanamarika ny herimpo ivelan'ny mahazatra ananan'i Kurginyan ,’ anasongadinany ny fihatsaram-belatsihy amin'ny fanakianana ny tetikady ara-tafik'i Strelkov miainga avy eny ambony seza mampahazo aina tsara.
Кургинян не имел права ОБВИНЯТЬ Стрелкова, сидя на ТЕПЛОМ диване.
— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) July 8, 2014
Tsy nànan'i Kurginyan ny zo HIAMPANGA an'i Strelkov raha mbola ilaozany mipetraka anaty sezalava MAFANA.
Nanampy trotraka ny zava-mahatsikaiky koa na dia i Konstantin Rykov aza, iray amin'ireo mpampiasa Twitter malaza indrindra sady mpomba ny ao Kremlin, tamin'ny namerenany nanamboatra ilay kisarin'i Kurginyan ho toy ny fitantaràna ny fahavoazan'i Brezila nandritry ny fiadiana ny Amboara Erantany:
Кургинян: «У меня два простых вопроса: зачем отдали мяч сопернику и кто дал проход Клозе?»
— Константин Рыков (@rykov) July 8, 2014
Kurginyan: “Fanontaniana roa tsotra kely ny ahy : fa naninona no nomen-dry zareo ny mpifanandrina taminy ny baolina ary iza no namela an'i [Miroslav] Klose hitsorapaka?”
Ny hafa avy ao amin'ny Twitter nandray anjara tamin'ny fanamboamboarana sary, naka ilay fanambin'i Navalny hamadihana ny taim-bavan'i Kurginyan ho lasa hatsikana.
Стар трек pic.twitter.com/JxXfuUwy4D
— Pavel Senko (@senko) July 6, 2014
— Хуевый Эмигрант (@ReggaeMortis1) July 6, 2014
Раз все Кургиняна постят pic.twitter.com/nMTAQTWUL0
— RIP Новости (@riarip) July 6, 2014
Satria ny olona rehetra samy mandefa sary momba an'i Kurginyan…
Tsy voafetra ho tao amin'ny Twitter ihany ny hagaigena. Andro maro lasa izao, fanangonan-tsonia iray tsy azo itokiana mba handraisana an'i Kurginyan ho isan'ny milisy mpihokon'ny Donetsk no hita nivoaka tao amin'ny Change.org, izay nahitàna olona 744 nankatò sahady ilay hevitra.
22 ora izayBelarosia